विकीनोमिक्स: कसरी ठूलो सहयोगले व्यवसाय परिवर्तन गर्दछ Martech Zone
सोमबार, मार्च 12, 2007 सोमबार, मार्च 12, 2007 Douglas Karr
पुस्तकको एक कडा आलोचना दिए पछि, मलाई लाग्छ कि यो साक्षात्कार पोष्ट गर्ने डॉन टेपस्कटसँग पोष्ट गर्नु उचित छ Wikinomics.
फेरी - म विषय मन पराउँछु। यो वास्तवमै मलाई मोहित गर्दछ र म विश्वास गर्दछु डनले भनेको सबै सही छ। म किताबबाट थाकेको थिएँ।
डनको व्यवसाय: नयाँ प्रतिमान
विकीनोमिक्स: अन्तिम अध्याय लेख्न सहयोग गर्नुहोस्.
तपाईको कर्पोरेट ब्लगिgies रणनीतिहरु राम्रा गर्न उत्तम संसाधनहरु